China 1070 Aluminium Tube Manufacture uye Factory |Yuanfang
1070 Aluminium Tube inoshandiswa zvakanyanya mumarudzi ese ekupisa kupisa, kupisa kupisa zvikamu.
Product parameters:aruminiyamu pombi okunze dhayamita 25mm-80mm, rusvingo ukobvu 3mm-10mm, kushivirira ± 0.1mm;
Competitive advantage:yakagadzikana mhando, yakanaka kurebesa uye yakasimba tishu density;
Nzvimbo yekushandisa:kupisa kupisa chinhu indasitiri yekutsinhana kupisa uye kupisa kupisa;
Minimum odha huwandu:500 kg;
Kutenderera kwekugadzira:5 mazuva ekushanda;
Packing nzira:mudzimba yemapuranga strip kurongedza, kunze kwemapuranga bhokisi kana simbi furemu kurongedza (kusanganisa mutengo weyuniti);
Mushure mekutengesa sevhisi:kupa rubatsiro rwehunyanzvi
Kutanga, yakakwira aluminium yemukati inogona kusvika 99.7%.
Chechipiri, kupisa kwekushisa, kupisa conductivity kwakanaka.
Chechitatu, zvichienzaniswa nezvinhu zvemhangura, mutengo unokwanisika.
1. Ndeipi michina yekuedza iyo kambani yako inayo?
Zvitatu zvinongedzo, kuomarara tester, spectrometer, kabhoni uye sarufa analyzer, isiri-inoparadza yekuyedza midziyo (ultrasonic flaw detector, sirivheri magnetic particle flaw detector), tembiricha yekuyera komputa hydraulic universal yekuyedza muchina, metallographic microscope, ultrasonic ukobvu geji, coating ukobvu kuyerwa Chimbo, roughness instrument,
2. Ndeipi nzira yehutano yekambani yako?
Iyo itsva chigadzirwa tsvagiridzo uye danho rekusimudzira rinotanga kugadzira zvigadzirwa zvemhando yezvirongwa, kugadzira zvigadzirwa zvekuongorora zviratidziro, uye pane-saiti yemhando yekudzora maitiro (matatu-nhanho gwaro rekuita).Kune marekodhi ekuongorora kuri kuuya, kuongorora kwezvinhu zvinopinda, kuongorora maitiro uye kuzviongorora kwevashandi.Vatariri vanofanirwa kuita ongororo yekutanga, kuongorora maitiro, uye kuongorora kwakazara.
3. Ndeipi dambudziko remhando iyo kambani yako yakambosangana nayo?Nzira yekuvandudza nekugadzirisa sei dambudziko iri?
Iyo kambani inoshandisa iyo PDCA kutenderera nzira kuita mhando yekuwana dambudziko, kuvandudza, uye kusimudzira.Mukugadzirwa kwechigadzirwa, pachava nediki mukana wekukanda kukanganisa uye pamusoro pekupedzisira matambudziko.Iyo kambani ichaita zviitiko zveboka reQC kuvandudza kuburikidza nekugadzirisa nekudzivirira matanho.
Zvakapfuura: Yakakura Heat Exchanger
Zvinotevera: Cylinder Head Of Medium Speed ​​Diesel Injini Series
Yakawedzerwa Aluminium Tube
Kupisa Yakakungurutswa Aluminium Tube